Doorashadii Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Oo Soo Shaac Bixisay Laba ...
Doorashadii guddoomiyaha guddiga doorashada oo soo shaac bixisay laba …
Muqdisho (Wararka Maanta) – Doorashadii ka dhacay teendhada Afisyooni, ee maanta lagu doortay guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa muujisay laba arrin oo mid ay aheyd lama filaan, midda kalena la qiyaasayey.
Arrinta koowaad ee doorashada kasoo shaac baxday ayaa aheyd sida ay u kala fog yihiin xubnaha mucaaradka ee sidii wadajirka ah uga soo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Arrinta cajiibka aheyd ee ka soo baxay doorashada guddoomiyaha guddiga FIET ayaa ah in xubno ka tirsan Musharaxiinta ay hoos ka taageerayeen guddoomiyaha maanta la doortay ee Maxamed Xasan Cirro oo ahaa Guddoomiyihii hore ee Guddigii doorashada ee la kala diray ka hor inta aan la kala saxiixan heshiikii 27-kii May, Cirro ayaa aad loogu xantaa inuu ku xiran yahay Villa Somalia.
Wararka Maanta : Macalin Cumar Maxamuud Xalane oo lagu aasay Beledweyne (SAWIRRO)
Midowga Musharaxiinta ayaa la sheegayaa inay ku kala qeybsanaayeen doorashada oo aanay hal musharax isku wada raacsaneyn, marka laga reebo in Liibaam Maxamed Xasan (Liibaan Shuluq) si gaar ah loogu tirinayay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Kooxda Waayo Arag.
Mushariinta ayaa xoogooda isugu geeyey sidii uu xilka guddoomiyaha ugu guuleysan lahaa Maxamed Cirro, maadaama ay u arkaan inuu isaga uga roon yahay Liibaan Shuluq oo ah shakhsi si weyn ugu ololeeya Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Liibaan Shuluq ayaa sidoo kale la sheegay inuu garab weyn ka helayey Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, waxayna midaan muujisay sida ay u yar tahay awoodda Rooble ee dhanka guddiyada doorashada dalka.
Wararka Maanta : Oromada ku dhaqan Somaliland oo ka cabanaya booliska iyo shacabka
Arrinta labaad ee doorashada kasoo shaac-baxday ayaa aheyd awoodda dhaqaalaha ku yeesha doorashadii maanta iyo in dhaqaalaha mar kale noqon doono waxa ugu muhiimsan doorashada xildhibaanada iyo madaxweynaha.
Sida aan xogta ku helnay Villa Somalia ayaa xubnaha dooranayey guddoonka u qeybisay lacago aad u badan, si ay u soo saarto guddoomiye Cirro. Sidoo kalena qaar ka tirsan musharixiinta ayaa lacag ku bixinayey inaan la dooran Liibaan Shuluq.
Doorashada Guddoonka Guddiga FEIT oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa guddoomiyaha guddiga loogu doortay Maxamed Xasan Cirro, kaas oo wareedgii koowaad helay 14 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan (Liibaan Shuluq) oo la tartamayay uu ka helay 10 cod.
Wararka Maanta : Uhuru Kenyatta oo jeediyey hadal 'ka dhan ah' Somalia - Caasimada Onli...
Doorashadaan oo ahayd mid aad u xamaasad sareysay ayaa waxaa ku tartamay shan musharax, iyadoo wareegii labaad ay u gudbeen Maxamed Cirro iyo Liibaan Shuluq.
Guddiga ayaa ka kooban 25 mudane, waxaana dalka ka maqan xubin ka mid ah, iyagoo 24-ka kale ay hoolka xaadir ku ahaayeen, isla markaana ay wada codeeyeen.
Guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada heer Federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa lagu tiriyaa inuu si weyn ugu dhow yahay garabka Fahad iyo Farmaajo, inkastoo uu isaga dhowr jeer sheegay inuu si cadaalad ah uga shaqeyn doono doorashooyinka Soomaaliya.
DF oo shaacisay in la dilay Maxamed Cabdi Toosoow – Wararka Maanta
Sababta Shabaab ku kaliftay xeeladda cusub ee qaraxyada Muqdisho ay u …
Musharaxiinta oo war kasoo saaray xilal ka-qaaditsii uu sameeyey Roobl…
Sidee ayuu madaxweyne FARMAAJO uga faa’iidayaa xil-ka-qaadista KULANE …
Wafti Jabuuti ka socda oo soo gaadhay caasimada Somaliland ee Hargaysa
Shil baabuur oo galaaftay nolosha dad rakaaba oo ka dhacay Boorama
Wararkii ugu Danbeeyey Arintii Siilaanyo & itoobiya Dhexmartay ee Shaaca…
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo xilka qaadis ku sameeyay laba Sarkaal oo…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweyne ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray tallaabadii uu Ra’iisul wasaare Rooble xilalkii uga qaaday saraakiil ka tirsaneyd hey’adda NISA, waxay fariin u direen Madaxweyne Farmaajo.
Ugu horeyn golaha ayaa taageeray go’aankii uu Ra’iisul Wasaaruhu xilalkii uga qaaday madaxii shaqaalaha ee hey’adda NISA Cabdullahi Kullane iyo Taliyihii NISA ee garoonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh, kuwaas oo sida lagu sheegay qoraalkaan isku dayay “inay si sharci-darro ah u hor-istaagaan xaqa dastuuriga ah ee xoriyada safarka iyo dhaq-dhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed.”
Wararka Maanta : Guddoomiyaha xisbiga Waddani oo ka hadlay mawqifka xisbigiisa ee furista...
“Golaha oo ka duulaaya marxaladda adag ee dalku marayo iyo xaaladda kala-guurka ah ee doorashada, waxay ugu baaqayaan dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in si wadajir ah loo dhawro Dastuurka iyo sarreynta sharciga, lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf iyo dib u dhac abuuri kara,” ayaa lagu yiri Bayaankaan ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta.
Sidoo kale Golaha ayaa soo jeediyey in tallaabada uu Ra’iisul wasaare Rooble uga hortagayo xayiraadaha sharci-darrada ah ee ka dhanka ah xoriyada safarka muwaadiniinta iyo mas’uuliyiinta Soomaaliyeed, ay noqoto mid si siman uga hirgasha dalka oo dhan.
Wararka Maanta : Ikraan Tahliil 'oo laga cabsi qabo in loo waayo' sidii weriye Jamaal K...
“Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo in uu ka waantoobo ku tumashada Dastuurka dalka oo uu caadeystay iyo faro-gelinta joogtada ah ee uu ku haayo geedi socodka dalkan u jiheeystay in ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta muddada loo cayimay,” ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka Midowga Musharaxiinta.
Muqdisho (Wararka Maanta) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xilalka ka qaaday taliyaha NISA ee Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh Cali iyo madaxa shaqaalaha NISA, Cabdullaahi Aaden Kulane (Kulane Jiis).
Kulane Jiis, waxa uu ka soo jeedaa gobolka lagu muransan yahay habraaciisa doorashada ee Gedo, waxaana la aaminsan yahay in uu ahaa masuulka labaad ee ugu awoodda badan hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA kadib Fahad Yaasiin.
Dad badan ayaa soo dhoweeyey tallaabada uu qaaday Rooble, kuna macneeyey inay ka dhigan tahay inuu si buuxda gacanta ugu hayo awoodda dalka, islamarkaana la wiiqay madaxweyne Farmaajo.
Xubnaha soo dhoweeyey tallaabada Rooble waxaa ka mid ah xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada ugu saameynta badan mucaaradka, kuna qeexay inay bilow u tahay tilaabooyin kale oo lagu taabo-gelinayo dowldnimada iyo in sharcigu taliyo, sida uu hadalka u dhigay.
Mahad Salaad ayaa sidoo kale sheegay inuu rajeynayo in tallaabada uu qaaday Rooble ay tahay digniinta kama dambeysta ah ee la-siiyay taliyaha NISA, Fahad Yaasiin.
Wararka Maanta : Wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya oo beenisay in ay ku lug leedahay...
Si kastaba, Wararka Maanta ayaa fahansan in go’aanka uu Rooble xilka kaga qaaday labada sarkaal, si gaar ahna Kulane Jiis ay guul-siyaasadeed dadban oo gadaal kasoo bixi doonta u tahay madaxweyne Farmaajo.
Xog lagu kalsoon yahay oo ay Wararka Maanta ka dhex heshay kooxda arrimaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo ayaa xaqiijisay in tallaabada xil ka qaadista Kulane Jiis ay tahay qorshe uu Farmaajo ka leeyahay Jubaland iyo Puntland, ra’iisul wasaare Rooble-na uu arrintaas qeyb ka yahay.
Ujeedada arrintan ka dambeysa ayaa ah in lagu cadaadiyo Axmed Madoobe, oo dhammaan kooxda ololaha doorashada Farmaajo ka xirtay albaabka laga galo Kismaayo ee garoonka diyaaradaha.
Axmed Madoobe ayaa sideeddii bishan waxa uu garoonka Kismaayo ka celiyey diyaarad uu saarna la-taliyaha Farmaajo ee arrimaha doorashada, Cabdi Cali Raage xili ay kasoo degi rabtay garoonka.
Taliyaha booliska qeybta Jubbada Hoose, Gaashaanle Sarre Sadiiq Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Cabdi Cali Raage uu qeyb ahaa abaabulka koox dooneysay inay hub sharci darro ah soo geliyaan magaalada, si ay u khal-khal geliyaan amaanka maamulka Jubbaland, oo ay ka hortageen.
Wararka Maanta : Chiesa Oo Loo Magacaabay Xidiga Ciyaarta Ee Kulanki Italy Iyo Spain.
Axmed Madoobe ayaa hadda laga soo xiray tallaabo kale uu Kismaayo ugu celiyo kooxda ololaha Farmaajo, haddii uu sidaas sameeyana waxay kusoo jeedin doontaa indhaha bulshada Soomaaliyeed oo idil, sida uu qorshuhu yahay
Tallaabada xigta ee qorsheysan waa in Kismaayo loo diro kooxda olelalaha Nabad iyo Nolol iyo xildhibaano taageersan Farmaajo oo deegaan doorashadoodu tahay Jubaland, Axmed Madoobe-na lagu cadaadiyo in uu oggolaado in ay Kismaayo ka dhex oleleeyaan kana tartamaan. Isla arrinkaan oo kale waxa uu ka billaaban doonaa Puntland.
Wararka Maanta ayaa ogaatay in kulan uu Rooble dhowaan Kismaayo kula yeeshay Axmed Madoobe la isku hadal qaaday arrinkan, taas oo ka careysiisay Axmed Madoobe, sababna u noqotay in Rooble uu diiday in Axmed Madoobe ama qof ka socda maamulkiisa uu ku wehliyo safarkiisii Gedo.
Wararka Maanta : Guddiga doorashada P/L oo si ka duwan guddiyada kale guddoon u doortay...
Rooble ayaa horey u fuliyey tallaabooyin si dadban ama si muuqda ugu daneynaya Farmaajo, waxaana ka mid ah in saddexdii xubnood ee uu soo magacaabay ee guddiga doorashada Somaliland ay noqdeen kuwa la saftay Mahdi Guuleed oo xulufo la ah Farmaajo, oo ay is-hayaan Cabdi Xaashi, ayada oo ballantu aheyd inuu soo magacaabo xubno dhex-dhexaad ah.
Waxa uu sidoo kale ku guuleystay in uu si deggan kusoo afjaro dooddii Midowga Musharraxiinta, isaga oo dhammaan dib usoo celiyay guddoonka guddiga doorashada oo uu muranku ka dhasahy, kadibna wadahadal ku dhameeyay khilaaf soo kala dhax galay Farmaajo, Guudlaawe iyo Qoor-Qoor.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale si dadban u dilay guddigii uu u magacaabay inay baaraan askartii loo diray Eritrea, kuwaasi oo lagu damiyey cadaadiska bulshada iyo mucaaradka, kadibna aan la ogeyn halkii u uku dambeeyey.
Jimco, Luulyo, 23, 2021 (Wararka-Maanta) – Wasiirka wasaarada dhaqanka iyo dhalinyarada dalka Jamhuuriyada Jabuuti Marwo Hibo Muumin iyo wafti ay hogaaminayso, ayaa soo gaadhay caasimada Somaliland ee Hargaysa.Waftiga ka socda Jamhuuriyada Jabuuti ayaa Hargaysa u yimid in ay ka qayb galaan carwada bandhiga bugaagta ee caalamiga ah ee Hargaysa (Hargeisa International Book Fair) oo maalinta bari ee 24 bishan Luulyo ka furmi doonta Xarunta Dhaqanka ee Hargeisa.
Wafiga ayaa waxa madaarka Cigaal ee caasimada Hargaysa kusoo dhaweeyay wasiirka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigalinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo wasiir ku xigeenka wasaarada arrimaha dibadda Somaliland ahna ku simaha wasiirka Liibaan Yuusuf Cismaan.
Wararka Maanta : Maxkamada sare ee Somaliland oo laashay dhamaan dacwadihii musharixiinta
Waxaa jira wufuud kale oo ka socota waddamada jaarka sida dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, oo soo gaadhaya magaalada Hargaysa si ay maalinta bari ah uga qayb galaan bandhiga bugaagta Hargeisa.
Jimco, Luulyo, 23, 2021 (Wararka-Maanta) – Wiil iyo gabadh dhalinyaro ah ayaa inta la ogyahay ku nafwaayay tiro kalena way ku dhaawacantay, shil baabuur oo ka dhacay meel aan ka fogayn hotelka Saw ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal.Shilka galaaftay noloshada dhalinyaradan, ayaa ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen gaadhi nooca loo yaqaano Vitz ta ah iyo Bas-caasi rakaab ah oo ay leedahay shirkada socdaalka alaabada iyo rakaabka ee Bari iyo Galbeed.
Shilalka baabuurta ayaa sanadkasta nolosha kumanaan qof ku galaafta deegaanada Somaliland, iyadoo shilkii ugu danbeeyay ee dad ku dhintaan uu 21 bishan Luulyo ka dhacay degmada Xamaas oo u dhaxaysa Hargaysa iyo Berbera.
Jimco, Luulyo, 23, 2021 (Wararka-Maanta) – Raysal wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka qaadis ku sameeyay Agaasimahii Shaqaalaha hay’adda Nabadsugida Cabdullaahi Kulane iyo taliyahii Nabadsugida ee garoonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh Cali.
Xilka qaadista lagu sameeyay labadaan masuul ayaa jawaab u aheyd talaabadii maanta garoonka Aadan Cadde loogu diiday iney ka dhoofaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa guddoomiyahii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimuu.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macalimuu oo goordhaw la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muwaadiniintii maanta laga joojiyay iney duulaan ay xaq u lahayeen iney ka duulaan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Dhawaan ayay aheyd markii Raysal wasaaraha Soomaaliya uu amar ku bixiyay inaanan garoonka Aadan Cadde laga celin karin muwaadin Soomaaliyeed oo doonaya inuu ka duulo garoonka, waxaana xilka qaadista labadan sarkaal ay imaaneysa xili maanta guddoomiyahii hore ee gobolka Gedo uu Raysal wasaare Rooble ka codsaday inuu xilka qaadis ku sameeyo Cabdulaahi Kulane oo ugu dambeyn xilka qaadis lagu sameeyay saacado kadib.
DEG DEG: Rooble oo xilalkii ka qaaday madax sare oo ka tirsan NISA + S…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa goordhoweyd xilalkii ka qaaday Agaasimihii Shaqaalaha hay’adda NISA iyo Taliyihii Nabad-sugidda ee groonka Aadan Cadde.
Afhayeenka xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in Cabdullaahi Kullane iyo Cabdiwaab Sheekh Cali xilkii looga qaaday kadib markii ay ka hor-imaadeen amarkii Ra’iisal wasaaraha ee dhigayey in qofna lagu celin karin garoomada dalka.
“Ra’iisal wasaare Rooble asaga oo ka jawaabaya muwaadiniin Soomaaliyeed oo si sharci darro-da ah maanta looga hor istaagay inay ka dhoofan garoonka Aadan Cadde, waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi Kullane, Agaasimihii Shaqaalaha hay’adda NISA iyo Cabdiwahaab Sheekh Cali, Taliyihii Nabad-sugidda ee groonka Aadan Cadde,” ayuu yiri Afhayeenka xukuumadda.
Sidoo kale waxa uu afhayeenka sii xoojiyey in marnaba loo dulqaadan karin in qof muwaadin ah lagu celiyo garoomada dalka, xili la filayo in dalka ka qabsoomto doorashooyinkii lagu heshiiyey 27-kii May.
Xil ka qaadista uu goordhoweyd sameeyay Ra’iisal wasaaraha ayaa daba socota dhacdo saaka garoonka Muqdisho loogu xanibay guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji (Macalimuu).
Cismaan Macalimuu oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay tahay markii Afaraad ee laga celiyo garoonka, islamarkaana la is-hortaago in uu u safro Garbahaarey, taasi oo uu sheegay inay ka dambeeyan Farmaajo iyo Cabdullaahi Kulane.
Wararka Maanta : Xildhibaano ka tirsan xisbiga UCID oo isbahaysi la samaystay xisbiga...
Wararka Somali6 hours ago
Wararka Somali9 hours ago
Caalamka Videos10 hours ago
Deg Deg: Mareykanka oo Digniin Culus u diray MD Farmaajo, Fariinta RW…
Wararka Videos19 hours ago
Awooda Militeriga ee Mareykanka, Dagaalka Ruushka & Xogta Nukliyeerka…
Caalamka Videos1 day ago
Uhuru Kenyatta oo Somalia weerar afka ku qaaday & Wararka duulaanka…
Wararka Videos1 day ago
Deg Deg: RW Rooble oo Cashir udhigay Mahdi & C/Xaashi, Deni oo Xildhibaano…
Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fulisay Muqdisho – Caasimada …
Tirada dadka daadadka ku dhintay ee Yurub oo kordhay – Wararka Maanta:…
Wada-hadallo u socda Dowladda Afghanistan iyo Taliban – Wararka Maanta:…
Xildhibaano ka tirsan xisbiga UCID oo isbahaysi la samaystay xisbiga…
Beeraleydka Khaadka Kenya ee Soomaaliya u soo dhoofin jiray oo qorsho…
7 maalin ka hor doorashada AQALKA SARE, astaamo aan wanaagsaneyn oo mu…
Deg Deg: Xiisad ka taagan Doorashadda, Rooble oo isbadalay & Qorshaha…
DF oo ka carootay warbixin Midowga Afrika uu kasoo saaray afartii sano…